‘रोनाल्डिन्होलाई घाइते बनाउन ३ लाख युरोको प्रस्ताव’ – Nepal Trends
रोनानाल्हिन्डोको आगमनपछि ला–लिगा फेरियो । यी ब्राजिलियनले चाडै सबैको ध्यान खिचे, अनि स्पेनिस फुटबलकै मुख्य आर्कषण बने ।
उनले नै बार्सिलोनालाई आफ्नो स्वर्णिम युगतर्फ डोहो-याए । तर सबैलाई उनको जादु मन परेको थिएन ।
रोनाल्डिनोलाई घाइते बनाउनका लागि उनलाई पैसाको प्रस्ताव भएको थियो ।
यो थियो, २००४ मा सेल्टा भिगो र बार्सिलोनाविरुद्धको भिडन्तको कथा । यतिबेला फर्नान्डो सेल्टा भिगोमा थिए ।
तर उनी आत्तिएनन्, बरु मलाई च्यालेन्ज गरे । उनले भने,‘यदी तिमी मलाई पक्रन सक्छौं भने ।’
‘तर मैले यसपछि उनलाई मार्क गरिँन । उनी रिसाइरहेका थिए र म डराएकाे थिएँ ,’ उनले भने ।
तर, रोनाल्डिन्होलाई मार्क गर्न जरुरी पनि थिएन, यो खेलमा इडुले गोल गरेपछि घरेलु टोली विजयी भयो र तीन अंक हासिल गरेकाे थियो ।
Hey Buddy!, I found this information for you: "‘रोनाल्डिन्होलाई घाइते बनाउन ३ लाख युरोको प्रस्ताव’". Here is the website link: https://nepaltrends.com/2020/06/24/%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%98%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%a4%e0%a5%87-%e0%a4%ac/. Thank you